SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
FUNGA IZVI: Uri mumiziyamu mauri kuratidzwa zvinhu zvekare. Zvakawanda zvacho zvine maburi maburi, uye zvimwe zvakafufunyuka. Zvimwe zvacho zvingori zvidimbu. Asi pane chimwe chisina kana pachakakanganisika. Unobvunza ari kukuratidza wacho kuti, “Ichi chitsva here?” Anobva ati, “Aiwa, ndechekare, uye hachisati chambogadziridzwa.” Unobva wabvunza kuti, “Changa chakachengetedzwa here?” Anoti, “Aiwa, chakaita makore chichinayiwa uye chichirohwa nemhepo. Pane vakatomboedza kuchipwanya.” Unogona kupedzisira wava kuzvibvunza kuti, ‘Saka chakambogadzirwa nei?’
Bhaibheri rinogonawo kufananidzwa nechinhu chekare ichi. Rakanyorwa kare uye rava nemakore akawanda kupfuura mamwe mabhuku. Asi kufanana nezvimwe zvinhu zvemumiziyamu zvambotaurwa, mabhuku akawanda ekare asara nenguva. Zvaanotaura nezvesainzi hazvichaenderani nezvava kuzivikanwa mazuva ano. Zvimwe zvaanotaura panyaya dzekurapa zvinogona kutokuvadzisa. Uye mamwe acho angova zvidimbu kana kuti haachanyatsoverengeki.
Zvakaitika kuBhaibheri zvakasiyana nezvakaitika kumabhuku aya. Rakatanga kunyorwa makore anopfuura 3 500 apfuura, asi zvese zvichirimo. Kwemakore akawanda, vanhu vakaedza kuriparadza, vachiripisa uye vachiribhana asi havana kubudirira. Bhaibheri harina kusara nenguva sezvinofunga vamwe. Rine zvinhu zvakawanda zvarinotaura zvinoratidza kuti ritori kumberi.—Ona bhokisi rakanzi “Rasara Nenguva Kana Kuti Ritori Kumberi?”
MAZANO ATINOWANA MUBHAIBHERI
Pamwe unombozvibvunza kuti, ‘Zvinodzidziswa neBhaibheri zvichiri kushanda here mazuva ano?’ Chimbofunga nezvemibvunzo iyi: ‘Matambudziko api ari kunyanya kunetsa vanhu mazuva ano? Ndeapi ari kunyanya kutyisa?’ Pamwe unogona kufunga nezvehondo, kusvibiswa kwenharaunda, kuparwa kwemhosva kana uori. Iye zvino chiona zvinodzidziswa neBhaibheri. Paunenge uchiverenga zvibvunze kuti, ‘Kudai vanhu vaishandisa mazano aya, tingadai tichirarama upenyu hwakaita sei?’
“Vanofara vanoita kuti pave norugare, nokuti vachanzi ‘vanakomana vaMwari.’” (Mateu 5:9) “Kana zvichibvira, nepamunogona napo, ivai norugare nevanhu vose.”—VaRoma 12:18.
NGONI UYE KUREGERERANA
“Vanofara vane ngoni, nokuti vachanzwirwa ngoni.” (Mateu 5:7) “Rambai muchishivirirana nokukanganwirana nomwoyo wose kana paine munhu ane chikonzero chokunyunyutira mumwe. Jehovha * zvaakakukanganwirai nomwoyo wose, imiwo itai saizvozvo.”—VaKorose 3:13.
KUGARISANA KWEMARUDZI EVANHU
Mwari “akaita marudzi ose evanhu kubva pamunhu mumwe chete, kuti agare pamusoro penyika yose.” (Mabasa 17:26) “Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.”—Mabasa 10:34, 35.
“Jehovha Mwari akabva atora munhu, akamugarisa mumunda weEdheni kuti aurime nokuutarisira.” (Genesisi 2:15) Mwari ‘achaparadza vaya vanoparadza nyika.’—Zvakazarurwa 11:18.
KUCHOCHORA UYE UFEVE
“Muchenjerere kuchochora kwemarudzi ose, nokuti kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) “Ufeve nezvinhu zvisina kuchena zvemarudzi ose kana kukara ngazvirege kumbotaurwa nezvazvo pakati penyu, sezvinokodzera vanhu vatsvene.”—VaEfeso 5:3.
KUVIMBIKA UYE KUSHANDA NESIMBA
“Tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose.” (VaHebheru 13:18) “Anoba ngaachirega kubazve, asi ngaashande nesimba.”—VaEfeso 4:28.
“Taurai zvinonyaradza mweya yakaora mwoyo, tsigirai vasina simba, itirai mwoyo murefu vanhu vose.” (1 VaTesaronika 5:14) ‘Tarisirai nherera nechirikadzi pakutambudzika kwadzo.’—Jakobho 1:27.
Bhaibheri harigumiri pakungotaura zvinhu izvi chete. Rinotidzidzisa kuti tingazvishandisa sei muupenyu. Kana vanhu vakawanda vakanyatsoshandisa zvinhu izvi, matambudziko anoita mashoma munyika. Saka chokwadi ndechekuti zvinotaurwa neBhaibheri zvinoshanda uye zvinonyatsoenderana nenguva yatiri kurarama! Zvinodzidziswa neBhaibheri zvingakubatsira sei parizvino?
KUBATSIRWA KWAUNGAITWA NEBHAIBHERI
Jesu akambotaura kuti: “Uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama nemabasa ahwo.” (Mateu 11:19) Zvaakataura izvi ndezvechokwadi. Kuti chinhu chizonzi chinobatsira, zvinoonekwa nezvachinoita. Saka unogona kufunga kuti: ‘Kana Bhaibheri richishanda zvechokwadi, rinofanira kuchinja upenyu hwangu. Ringandibatsira sei pamatambudziko andiri kusangana nawo?’ Inzwa zvakaitika kune mumwe mukadzi.
Delphine * ainakidzwa neupenyu, zvinhu zvichimufambira. Asi pakazongoerekana paitika zvinhu zvinorwadza. Akafirwa nemwanasikana, akarambana nemurume uye akapererwawo nemari. Anoyeuka kuti: “Ndakanga ndisingachatombozivi kuti ndimbori ani, nekuti ndakanga ndisisina mwana, murume, uye imba. Ndainzwa sendisiri chinhu, ndisina simba uye ndaishaya chekuraramira.”
Delphine akatanga kunzwisisa mashoko aya: “Mazuva emakore edu makore makumi manomwe; asi kana tiine simba kwazvo, makore makumi masere, asi anoramba achiunza kunetseka nezvinhu zvinokuvadza; nokuti achakurumidza kupfuura, tobhururuka, toenda.”—Pisarema 90:10.
Delphine akabatsirwa neBhaibheri panguva iyi yainge yakaoma. Kumubatsira kwarakaita kunoshamisa. Sezvichatsanangurwa nenyaya nhatu dzichatevera, vakawanda vakaona kuti Bhaibheri rakavabatsira chaizvo pavakashandisa mazano aro muupenyu hwavo. Vakatanga kuona kuti Bhaibheri rakaita sechinhu chekare chiri mumiziyamu chataurwa patangira nyaya ino. Harina kufanana nemamwe mabhuku anosara nenguva. Chii chinoita kuti Bhaibheri risiyane nemamwe mabhuku? Zvarinotaura zvinobva kuna Mwari here kana kuti ipfungwa dzevanhu?—1 VaTesaronika 2:13.
Unogona kunge wakaonawo kuti upenyu hupfupi uye hwakazara matambudziko. Paunomomoterwa nenhamo, unotsvaga kupi mazano uye nyaradzo?
Bhaibheri rinogona kukubatsira munzira nhatu. Rinogona kukudzidzisa kuti
ungadzivisa sei matambudziko.
ungagadzirisa sei matambudziko.
ungatsungirira sei zvinhu zvausingagoni kuchinja.
Nyaya dzinotevera dzichatsanangura zvinhu 3 izvi.
^ ndima 10 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.—Pisarema 83:18.
^ ndima 24 Munyaya ino nedzimwe 3 dzichatevera, mamwe mazita akachinjwa